Ma xiiseyneysaa cunno bilaash ah carruurtaada xagaagan? | Faahfaahinta Wararka Degmada - Dugsiyada Dadweynaha ee Deegaanka Hargabku ISD 834
Waxaan siin doonnaa cunnooyin bilaash ah cunug kasta oo ka tirsan beesheena da'doodu u dhexeyso 1 illaa 18 xagaaga oo dhan. Iyada oo loo marayo barnaamijkan federaalka ah, cunnooyinka toddobaadka (oo ay ku jiraan 5 quraac iyo 5 qado) ayaa loo heli doonaa ka soo qaadashada Dugsiga Sare ee Stillwater Jimce kasta Jimce 11 am ilaa 12:30 pm
Ma jiraan wax xaddidan oo dakhli ah oo qof walba waxaa lagu dhiirrigelinayaa inuu ka faa'iideysto fursaddan. Uma baahnid inaad horay isu diiwaan geliso ama aad u soo gudbiso wax waraaqo ah si aad uga qayb gasho. Si aad nooga caawiso qorshaynteena, kaliya noo sheeg inaad xiisaynayso, iyo inta carruur ah ee aad u baahan doonto cunto, adoo dhammaystiraya foomkan gaaban, ee aan lagaranayn khadka tooska ah .